महिलाहरूको लागि ब्याकलेस स्लीभलेस कट-आउट टिप-अप हल्टर क्रप टोपहरू खरीद गर्नुहोस् - नि: शुल्क शिपिंग र कुनै ट्याक्स छैन | WoopShop®
ब्याकलेस स्लीभलेस कट-आउट टिप-अप हल्लि क्रप टॉप्स महिलाहरूको लागि
$ 13.99 नियमित मूल्य $ 27.99
रंग हरियो कालो सेतो
हरियो / एम हरियो / एल कालो / एल हरियो / एस कालो / एस कालो / एम सेतो / एल सेतो / एस सेतो / एम
बैकलेस स्लीभलेस कट-आउट टिप-अप हल्टर क्रप टोप महिलाहरूको लागि - हरियो / एम backordered छ र यो शेयर मा फिर्ता छ रूपमा चाँडै जहाज हुनेछ।
शीर्ष प्रकार: ट्याank्क माथि
SIZE / CM BUST लम्बाइ
नोट: साइज चयन गर्न कृपया सर्टिफिकेट आकार चार्टको पालना गर्नुहोस्। तपाईंको बानीको मुल्य अनुसार चयन नगर्नुहोस्। म्यानुअल मापनको कारणले आकारमा १--1 सेमी फरक हुन सक्छ। कृपया जब तपाईं मापन नोट गर्नुहोस्। यो वस्तुको केहि लोच छ, र त्यहाँ वस्तु र चित्रहरु को बीच एक सानो रंग फरक छ।
45 समीक्षाहरूमा आधारित
साँच्चै राम्रो शीर्ष, राम्रो गुणस्तरको सामग्री।
मूल्य को लागी राम्रो गुण र वास्तवमा प्यारा!
कालो मा राम्रो देखिन्छ, को माध्यमबाट र वास्तवमा प्यारा फिट छैन
मलाई आवश्यक भएको दिनमा दुई हप्ता भन्दा कममा आइपुग्यो! यससँग खुसी छ, राम्रो गुण, राम्रो सामग्री र चित्रहरु जस्तो देखिन्छ।
फोटो जस्तो देखिन्छ कि महान शर्ट।